PHOTOSHOP မှာလမ်းညွှန်များ - PHOTOSHOP ကို - 2019
လျှောက်လွှာလမ်းညွှန် Photoshop ကို
ပုံရိပ်တွေရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက်မာစတာယူနစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုအပေါ်မူတည်ပေမည်: အသီးသီးဓာတ်ပုံတ္ထုများ၏အဖြစ်များတတ်သည်ပုံကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပြီးအဆိုပါပုံရိပ်အရည်အသွေးလျော့ကျမည်, အလုပ်မာစတာအခညျြးနှီးထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ဓာတ်ပုံတ္ထု equalizing အတွက်တာဝန်ရှိသည်နှင့်အပုံ၏တစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းမှုတလျှောက်ကသူတို့ကိုနေရာဖြစ်သောတစ်ဖြောင့်ဆွဲ - ဤပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန်အရှိဆုံးရိုးရှင်းပြီးစျေးနှုန်းသက်သာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
editing software ကို Adobe က Photoshop ကိုဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုအဘို့များစွာသောရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းပေမယ့်အရိုးရှင်းဆုံးနှစ်ဦးစလုံးဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်စီစဉျနိုငျသောလမ်းညွှန်လိုင်းများဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါအရန် tool ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆုံးဖြတ်ရန်အပြာစင်းကနေတဆင့် illuminated နိုင်ပါသည်။ ဒီ tool ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမှမျက်စိမရရှိနိုင်ခဲ့က menu ကတဆင့်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည် "View" စာနယ်ဇင်းများ "နယူးလမ်းညွှန်"ချက်ချင်းနှိပ်ပြီးနောက်ဖွင့်လှစ်သောပေးတဲ့ dialog box ကိုည, မျဉ်းနှင့်၎င်း၏သြဒီနိတ်များအတွက်ဆန္ဒရှိဦးတည်ချက်ကိုရွေးချယ်ပါ။
အလုပ်လုပ်အလတ်စား၏လက်ဝဲဘက်နှင့်ထိပ်တန်းအိတ်ဖွင့် window ကိုလည်း pixels အရေအတွက်သတ်မှတ်ရမယ်ဒါတိုင်းတာခြင်း, pixels ကိုထဲမှာဖော်ပြပါတယ်သောစကေးနှင့်အတူမင်းရှိပါတယ်။ ဤအတိုင်းတာမှုများလုပ်ပြီးနောက်အစောပိုင်းကပေးထားသောတစ်ဦးအခြို့သောဦးတည်ချက်အတွက်ပုံအညီမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မည်။
Photoshop မှာလမ်းညွှန်များထည့်သွင်းရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ဘယ်ဖက် mouse ကိုခလုတ်နှင့်အတူ click နှိပ်ပြီးလိုချင်သောဦးတည်ချက်အတွက်လက်ဖြင့်ကိုင်ထားရပေမည်။ ထိုခဏခြင်းတွင်သောနောက်, ပုံသဏ်ဌာနျအပြာလမ်းညွှန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
မာစတာလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်ကွဲပြားဒီဂရီ၌နေသောအခွင့်အလမ်းများကိုတွေအများကြီးကိုထောက်ပံ့ပေး Created, အပြုသဘော image ကိုအရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်သူတို့ထဲကအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
snap function ကိုချိတ်ဆက်နေဖြင့်လမ်းညွှန်များမှ objects - သငျတ္ထု align နှင့်အပြာရောင်လိုင်းမှလေးစားမှုနှင့်အတူသူတို့ကိုချည်နှောင်ချင်လျှင် function ကိုအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
အဖြစ်မကြာမီအရာဝတ္ထုမျဉ်းနီးကပ်လာသည်အတိုင်း, ကသံလိုက်နဲ့တူဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ feature ကိုသက်ဝင်စေရန်, မီနူးကိုသွား "View" ကာ option ကို select လုပ်ပါ "လမ်းညွှန်များမှ SNAP".
အဆိုပါအပြာရောင်လိုင်းစပ်လျဉ်းအရာဝတ္ထု align, ကတလျှောက်ရွှေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကလမ်းညွှန်က်ဘ်ဆိုက်များကိုစညျးပစ်မှတ်များတွင်မပါဝင်လျှင်, သင်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်နှိမ့်ချကိုင်သင့်မရှိတော့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် binding ကဒီအတိုင်းအတာ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုပြီးနောက်, လမ်းညွှန်ကနေရှည်လျားသောအကွာအဝေးပေါ်မှာထားပါ။
အမြင်အာရုံကိုသင်ယာယီ, Photoshop မှာ keyboard shortcuts တွေကိုများ၏အစုကိုပုလမ်းညွှန်များကိုဖယ်ရှားနိုင်, မီနှင့်ပြီးနောက်ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အတွက် CTRL + H ကို ဒါဟာပုံရိပ်တွေပမာဏနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်အရေးကြီးသောအရာ, မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပြုလုပ်အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ပြုပါတယ်။ နောက်ကျောကသူတို့ရဲ့နေရာတွေကိုလမ်းညွှန်လိုင်းများ: သော့ဆင်တူ Clamp တဖန်ပြန်လာသောခံရဖို့။
အားလုံးလမ်းညွှန်လိုင်းများ Remove, သင် function ကိုသုံးနိုငျ "View - »လမ်းပြ Remove.
ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့နှလုံးအလိုရှိသကဲ့သို့သင်တို့ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်အစီအစဉ်အတွက် Adobe က Photoshop ကိုလမ်းညွှန်ထဲမှာ: ဤတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ function ကိုကူညီပေးပါမည် "ရွှေ့"။ ဒီ feature ဒေါင်လိုက်တည်ရှိပြီးသော toolbar ကိုအပေါ်နိုင်ပါတယ်ရှာပါ။ ရောက်သည်ခံရဖို့ကိရိယာတခုရွေးချယ်ခြင်း « V ကို» ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။
စစ်ဆင်ရေးပြီးပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အဆိုပါ cursor ကိုမဆိုဦးတည်ချက်အတွက်အပြာလိုင်းပြောင်းရွေ့နိုင်သည့်နှစ်ဆမြှားအဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
တခါတရံမှာပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီတ္ထုများကိုညီမျှစေရန်အလုပ်အမြန်ရလဒ်များကိုလိုအပ်ပါတယ်နှင့်လမ်းညွှန်လက်၏ဖန်တီးမှုသညျးမခံပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအဘို့, program ကိုသင်ပိုက်ကွန်ကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
မီနူးထဲမှာဒီ tool Created "View - ပြရန် - Grid"။ သင်တို့သည်လည်းပေါင်းစပ်ချကိုင်ထားနိုင်ပါတယ် CTRL + ''.
ပုံမှန်ဇယားကွက်လမ်းညွှန် mode မှာလေးပိုင်းခွဲခြား, အာကာသလက်မဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်များအကြားအကွာအဝေးကိုပြောင်းမီနူးအပေါ်နိုင်ပါတယ် "Edit ကို - ဆက်တင်များ - လမ်းညွှန်များ, Grid နှင့်အပိုင်းအစများ".
အဆိုပါဇယားကွက်ကထိုကဲ့သို့သောစာသားကိုအရာဝတ္ထုအဖြစ်တ္ထု၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားညီမျှစေရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကိစ္စတွင် Photoshop ကို wizard ကိုဝင်ငွေလိမ့်မည်။
သိသိသာသာအပြောင်းအလဲနဲ့အဆောက်အဦကိုလျှော့ချမည်သည့်အစာရှောင်ခြင်းလိုင်းများတစ် function ကိုလည်းရှိပါသည်။ သူတို့ကိုသက်ဝင်ပြီးနောက်သူတို့အခန်းက္ပကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်ပြသကြသည်ကိုအခြားတကယ်တော့၏လိုင်းများအကြားကွာခြားချက်များ။
ဤရွေ့ကားလမ်းပြဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်တ္ထုများအကြား space ကိုသရုပ်ပြပါ။ ထိုသို့သောသံလမ်းအတိုင်းအရာဝတ္ထုများ၏ရွေ့လျားနေသည့်လမ်းကြောင်းက၎င်း၏အနေအထားကိုပြောင်းလဲပစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအသုံးဝင်သောနှင့်နေရာလေးကိုအင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်စေရန်, မီနူးကိုသွား "View - ပြရန် - လျင်မြန်စွာလမ်းညွှန်လိုင်းများ".
အဆိုပါလမ်းညွှန်များဘဝ fotoshopera အတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေများမှာ - အရာဝတ္ထုများ၏တိကျနေရာချထားအတွက်ဒေသများ၏ရှင်းလင်းခွဲဝေကူညီရန်နှင့်အမြန်လမ်းညွှန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှ positioning ကိုဒြပ်စင်ဆွေမျိုးခွင့်ပြုပါ။